2021 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ NEV အရောင်း အဆင့်: တက် စ လာ ပထမ၊ BYD ဒုတိယ - Pandaily
2021 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ NEV အရောင်း အဆင့်: တက် စ လာ ပထမ၊ BYD ဒုတိယ
Feb 07, 2022, 16:34ညနေ 2022/02/07 22:27:19 Pandaily
အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ကား သတင္းအခ်က္အလက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ မွာ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔ကသန့်ရှင်းရေး နည်းပညာ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Global New Energy Vehicle (NEV) အမှတ်တံဆိပ် ရောင်းအား အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က NEV ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရောင်းအား သည် ၆. ၅ သန်း နီးပါး ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၀၈ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက် ခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် ထိပ်တန်း အမှတ်တံဆိပ် ၂၀ ၏စုစုပေါင်း ရောင်းအား သည် ၄. ၇ ၆၃, ၄၀၀ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရောင်းအား ၏ ၇၃. ၃% ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ထိပ်တန်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၂၀ အနက် ၈ ခု သည်တရုတ် မှ ဖြစ်ပြီး၊ ဂျာမနီ မှ ၄ ခု၊ အခြား ဥရောပ နိုင်ငံများမှ ၃ ခု၊ အမေရိကန် မှ ၂ ခု၊ တောင်ကိုရီးယား မှ ၂ ခုနှင့် ဂျပန် မှ ၁ ခု တို့ဖြစ်သည်။
ယခင်နှစ် နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင် သုံး ခရီးသည်တင် ကား အသစ် များ၏ ရောင်းအား သည် ၁၀၈% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ အမြင့်ဆုံး တိုးတက် မှုဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင် အသစ် ခရီးသည်တင် ကား များ၏ စျေးကွက် အရွယ်အစား မှာ ၆. ၅ သန်း နီးပါး ရှိပြီး စျေးကွက် ဝေစု ၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။
၎င်းတို့အနက် စင်ကြယ်သော လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များ (EV) နှင့် plug-in hybrid မော်တော်ယာဉ် များ ၏ကြီးထွား နှုန်းသည် သိသိသာသာကွာခြား မှုရှိသည်။ စင်ကြယ်သော လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များ၏ ရောင်းအား မှာ ၃၂၀, ၈ ၁၀ ဖြစ်ပြီး DM plug-in hybrid မော်တော်ယာဉ် များ၏ ရောင်းအား မှာ ၂ ၇၂, ၉ ၃၅ ဖြစ်သည်။ စင်ကြယ်သော လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များနှင့် plug-in hybrid မော်တော်ယာဉ် များ၏ ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၆၉% နှင့် ၃၁% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဟိုက် ဘရစ် ကား များသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။
တရုတ် အမှတ်တံဆိပ် ရှစ် ခုမှာ BYD ၊ SAIC Group ၊ SAIC ခရီးသည်တင် ကား၊ Great Wall Automobile Ora ၊ GAC Aion, Chery, Xiaopeng Automobile နှင့် Changan Automobile တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက် BYD သည် ရောင်းအား ၅၉ ၃၉ ၀၀ ဖြင့် ဒုတိယ နေရာတွင် ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂၂၀% ကျော်နှင့် ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ဝေစု ၉. ၁% ရှိသည်။ SAIC Group သည် ရောင်းအား ၄ ၅၆, ၁၀၀ ဖြင့် တတိယ နေရာတွင်ရှိသည်။ ယင္း အမွတ္တံဆိပ္ ရွစ္ ခု သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ တစ္၀န္း စြမ္းအင္ သစ္ ေရာင္းခ် မႈ စုစုေပါင္း ၏ ၂၈ ဒသမ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ သိရသည္။
အမျိုးမျိုးသော ကား ကုမ္ပဏီ များ၏ စျေးကွက် ဝေစု အရ တက် စ လာ သည် ၁၄. ၄% ဖြင့် ဦး ဆော င်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ခုတည်းသော မော်တော်ယာဉ် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပြီး စျေးကွက် ဝေစု ၁၀% ကျော်ရှိသည်။ သို့သော် အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ၏ ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ဝေစု သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ကျဆင်း နေသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၁၂% ၊ ၂၀၁၉ တွင် ၁၇% ၊ ၂၀၂၀ တွင် ၁၆% နှင့် ၂၀၂၁ တွင် ၁၄% ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် အမှတ်တံဆိပ် ကို ဇန်န ၀ ါရီလ တွင် ဖြန့်ချိ ခဲ့သည်T
ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ SAIC နှင့် Volkswagen တို့သည် နှစ်စဉ် ရောင်းအား ၃၀၀, ၀၀၀ ကျော် သော ကုန်အမှတ်တံဆိပ် နှစ်ခု သာ ရှိပြီး ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ဝေစု ၇. ၀% နှင့် ၄. ၉% အသီးသီးရှိသည်။ နှစ်စဉ် ကား အစီးရေ ၂၀၀, ၀၀၀ ကျော် ရောင်းချ သော ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များမှာ BMW, Mercedes-Benz နှင့် SAIC ခရီးသည်တင် ကား များဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ဝေစု ၄. ၂% ၊ ၃. ၅% နှင့် ၃. ၅% အသီးသီးရှိသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင် သုံး ခရီးသည်တင် ကား အသစ် ၂. ၉ ၃၉, ၈၀၀ ရောင်းအား ဖြင့် တရုတ် သည်ပထမ နေရာတွင် ရှိပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင် သုံး ခရီးသည်တင် ကား ဈေးကွက် ၏ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် တရုတ် စျေးကွက် တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များ၏ ရောင်းအား သည် များသောအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
အသေးစား အလတ်စား SUV ကားသစ် ဓာတ်ပုံများ ထွက်ပေါ်ခြင်း၊ အလင်းဝင်ခြင်း၊ လေဆာရေဒါနှင့် လေခွန် ရပ်ဆိုင်းခြင်း စနစ်များ
အတွင်းခန်း ဓာတ်ပုံတွေအရဆိုရင် အသေးစား အလတ်စား SUV အသစ်တမျိုး ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီထုတ် မော်ဒယ်သစ်ရဲ့ စတုတ္ထမြောက် မော်ဒယ်ပါ။
Auto Sep 01 စက်တင်ဘာ 1, 2021
Ministry: Tesla က လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္က Warwa အတြက္ ေဒၚလာ ၃၂၉ သန္း ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိ
တနင်္လာနေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ တရုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ သတင်းအချက်အလက်ဌာန (MIIT) ရဲ့ အချက်အလက်တွေအရ Tesla ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ တရုတ်မှာ ကားအစီးရေ ၁၀၈၂ စီး ရောင်းချရပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့ ထောက်ပ့ံမှု စုစုပေါင်း ယွမ် ၂၁.၂ သန်း (၃၂၉ သန်း) ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Auto Sep 07 စက်တင်ဘာ 8, 2021